Fifandraisana amin’ny any ivelany : Hanamafy fiaraha-miasa i Angletera sy Cuba ary Espaina -
AccueilRaharaham-pirenenaFifandraisana amin’ny any ivelany : Hanamafy fiaraha-miasa i Angletera sy Cuba ary Espaina
Mihazakazaka ny ho eto Madagasikara ireo firenena vahiny. Ankoatra ireo masoivoho vahiny efa eto an-toerana, dia tonga nanatitra ny taratasy manendry azy tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha, ireo masoivoho vahiny telo, ny Dr Philip Boyle avy amin’i Angletera, Ernesto Gomez Diaz avy amin’i Cuba, ary Carlos Enrique Fernandez-Arias Minuesa avy amin’i Espana.
Manamarika avy hatrany izany fa ananan’ireo firenena vahiny fahatokisana tanteraka i Madagasikara hatramin’ny naha tafaverina antsika teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Hita taratra amin’izany sahady fa hanamafy ny fiaraha-miasa amin’i Madagasikara ireo firenena vahiny telo vaovao nandefa solontena hiasa eto amintsika ireo.
Araka izany, nanambara ny masoivohon’i Angletera, ny Dr Philip Boyle, fa mahafaly azy ny fahatongavany eto Madagasikara. Betsaka, hoy izy, ny asa hotanterahina eto, ary ny teo alohany, izay nodimbiasany no efa nanomboka ny asa sy nametraka izany. “Hohatsaraintsika ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta, indrindra eo amin’ny lafin’ny fiarovana ny tontolo iainana, ny varotra ary ny fitantanana mahomby”, hoy ity masoivohon’i Angletera ity.
Tetsy andaniny, nanambara indray kosa ny masoivohon’i Cuba, Ernesto Gomez Diaz, fa tombony goavana ny fahatongavana miasa eto Madagasikara. “Hohamafisintsika ny fiaraha-miasa amina sehatra maro, toa ny ady amin’ny kolikoly, ny tontolon’ny fahasalamana, ary ny fambolena sy ny jono, sns. Hiara-hiasa ihany koa isika amin’ny fampiroboroboana ny tanora amin’ny fanomezana vatsim-pianarana ho an’ny tanora malagasy”, hoy i Ernesto Gomez.
Ankoatra izay, nanambara ny avy amin’i Espana, Carlos Enrique Fernandez-Aria Minuesa fa nibahan-toerana tamin’ny resaka nifanaovana ny mahakasika ny fiarahan’ny firenena roa tonta. “Hotohizana hatrany ny fiaraha-miasa eo amin’ny sehatra an-dranomasina amin’ny alalan’ny hetsika “Atlanta”, izay efa nisy nandritra ny 10 taona mahery”, hoy ity masoivohon’i Espana ity.